Former Higher Education Minister Jonathan Moyo who is in hiding has claimed that Zimbabwe will become another Somalia if the President Emmerson Mnangagwa's administration continues in power.
Zimbabwe's long-time leader Robert Mugabe, who was forced to resign after a military coup in November, at the time accused Mnangagwa of orchestrating the booing of his wife.
Mrs Mugabe was awarded a PhD by the University of Zimbabwe. Moyo has been disparaging the government of Mnangagwa as illegitimate.
"This is in part because our trade patterns have been aligned to service the requirements of former colonial powers and partly because many African countries essentially produce similar goods, mainly agricultural and mineral commodities", Geingob said in a statement delivered during the official opening of the Zimbabwe International Trade Fair a year ago.
"If anyone out there thinks that Zimbabweans are going to embrace the coup and entrench these leader forget about that because right now the cabinet is led by the most feared people in the history of this country".
A Zanu-PF activist who led a group of people who booed former First Lady Grace Mugabe during the ruling party's youth rally at White City Stadium in Bulawayo past year has been granted liberation hero status following his death in a auto accident this week.